Imibuzo evame ukubuzwa mayelana nobulili
Ubulili bungenasiphelo esingenasiphelo njengempilo ngokwayo. Kuphela kubonakala ngathi siyazi konke mayelana nobulili njengoba kuphakama izinkinga ezintsha. Yini eyingozi kumuntu wesilisa omdala? Iziphi izingxenye ezinobungozi amadoda azikhohliwe? Uyini umfazi we-ejaculation? Izimpendulo zemibuzo ebuzwa kakhulu ngokuphathelene nobulili - obalulekile, obuseduze nesibindi - funda ngezansi.
Umbuzo 1. Ubani owasungula ikhondomu?
Ngokusho komlando, le mithanguzo yenzelwe u-3000 BC. Inkosi yaseCrete Minos, owayevame ukukhaphela umkakhe uPasiphae, waqalekiswa ngunkosikazi onomhawu: ngaphansi kwesiphakamiso ngesikhathi ejaculation, akazange aphume nge-cum, kodwa ngezinyoka nezinyoka, kanye nezinkosikazi zakhe zafa ngenxa yokukhala. Khona-ke uMinos wacabanga ngokuletha isilwane sesifuba sangaphakathi kwesithandwa sakhe - futhi ikhondomu yasungulwa. Kodwa ekudayiseni kwamakhondomu kwafika kuphela ngo-1712. Zasetshenziselwa ukuhlanzeka komuntu siqu lapho zihambela amabhantshi nezindlu zokuzijabulisa.
Umbuzo 2. Kungani ukusoka kudingekile?
I-urologist Mikhail Sapkov uyachaza: "Ukusoka kokuqotshwa kwekhanda lepenisi ngokuvamile kubhekwa njengendlela yokuhlanzeka, ngoba ngaphansi kwejwabu, ama-microbes kanye nocwangu angagcina, abangela ukuvuvukala nokuzwa okungathandeki kumuntu," kuchaza urologist uMikhail Sapkov. "Ngaphezu kwalokho, ikhanda ngemuva kokusoka kancane kancane, okuyinto evumela indoda ukuba enze ukuqhuma okuqhubekayo futhi eside ngaphandle ingozi ejaculation ngaphambi kwesikhathi."
Ngakho udinga ukusoka noma cha? Akusekho ukuvumelana phakathi kodokotela kanye nososayensi. Kodwa uma ijwabu livuleka kabi futhi umuntu ezwa ubuhlungu phakathi nokuphazamiseka, odokotela beluleka ukuthi ukusoka kwenziwe ngisho nangumuntu omdala. Lo msebenzi uphephile ngokuphelele.
Umbuzo 3. Ingabe iphunga lingathinta isifiso?
Ezindabeni ezithandekayo, ngokuvamile zikhona "izindaba zokunuka": abathandi ababili bayathokozisa kakhulu "ukuphefumula", ukuthi abakwazi ukuwaphula. Kuzocansi, kukhona ngisho negama elikhethekile - "ukuhambisana kwamakhemikhali". "Ukubaluleka kwephunga ngokuphila ngokobulili akunakunakwa," isazi sezocansi uVladimir Prokhorov siqinisekile. - Ngokuqinisekile waphawula ukuthi indoda ikuvakashela ngenye yezinto ezibonakalayo, futhi awukwazi ukuchaza kahle ukuthi yini ekukhangayo. Lona amandla wephunga. Iphunga lomthandi lingahle likhange kangangokuthi amanye amadoda azokuchofoza! Kanjalo nenhlakazi yensikazi. Le ndoda imkhumbula izinsuku ezimbalwa. "
Umbuzo 4. Ubulili obuphelele buhlala isikhathi esingakanani?
Ucwaningo olusha ngabakwa-sexologists lubonise ukuthi ubude besikhathi socansi buvela emaminithini amathathu kuya kwangu-13. Le nhlolovo, eyanyatheliswa kuyi-Journal of Sexual Medicine (USA), yaba khona imibhangqwana engu-1 500. Ukuhlaziywa kwemininingwane etholakalayo kubonise ukuthi ubude besilinganiso sobulili bungu-7.3 amaminithi. Ngesikhathi esifanayo, ama-preludes amade awahambeleli kokubili amadoda nabesifazane.
Umbuzo 5. Yini eyenza sibe sexy?
Izambatho ezizuzisa kakhulu abesifazane, ngokucwaninga - lokhu kugqoka. Esikhathini sesibili - i-jeans eqinile, i-skirts emifushane, izikhwama ezinzima zebhizinisi, izingubo zangaphansi ze-lace ezimnyama, ukungabi nalutho lwe-brassiere nezithende. Kuphawula nokuthi owesifazane ogqokeni obomvu noma olalanti ubangela isithakazelo esiningi socansi kumadoda kunesibhakabhaka, esimhlophe noma esimhlophe. Amadoda ayamukeleki isisekelo se-multi-layered kanye nezipikili ezikhanyayo.
Umbuzo 6. Ngingayandisa amabele ami ngokudla?
"Ayikho isimangaliso esiyinkimbinkimbi esenzelwe ukwandiswa kwebele," kusho u-Irina Malikheeva, isazi sezinkinga zokubeletha. - Ungakholelwa ukuhleka okuthandwayo mayelana nezakhiwo eziyisimangaliso zeklabishi kanye nomhluzi odakayo. Kodwa ukudlala ezemidlalo kungashintsha umumo futhi kwandise kancane isifuba ngenxa ye-pectoral muscle enkulu, ekhonza ngokuthi "isisekelo" sebele. Ubungako be-mammary gland inqunywa ubuhedengu: cishe, awukwazi ukuncintisana nomama wakho. Kodwa-ke, emthonjeni we-mammary kukhona izicubu ezinamafutha, ngakho-ke ngokuzuza kwesisindo somzimba, isifuba siyoba mkhulu kakhulu, futhi uma ulahlekelwa isisindo, ngokuphambene nalokho, kuyoncipha. " Kodwa-ke, izinhlolovo zithi akulona usayizi. Amadoda afana nomthamo ngokwakho, kungaki, ifomu elingashintshwa kalula.
Umbuzo 7. Ubulili obuhle - buyingozi yini?
Ukuhlolwa okunjalo kungabangela ukulimala kuphela uma ungagcini "inqubo yokuphepha". "Ubulili obucansi budinga ukulungiselela okuningi. Owesifazane udinga ukuphumula imisipha ngangokunokwenzeka, ngaphandle kwalokho umlingani uzingozi ukulimaza i-mucosa yama-rectal, - uchaza isazi sezocansi uVladimir Prokhorov. - Futhi uzodinga i-lubricant yokufakelwa - i-lubricant, ukwenza lula ukungena nokukhipha ubuhlungu. Yenza ngokucophelela futhi uthathe isikhathi sakho, ugxile emizweni yakho. Uma ugula noma ungakhululekile, qiniseka ukuthi utshela umlingani wakho ngakho futhi ubacele ukuba bayeke.
Umbuzo 8. Kungani sidinga ukumanga?
Ubusiso bobulili bukhulula izinto eziyingozi zamakhemikhali ezenza umphumela wengqondo ebuchosheni, izikhathi ezingaphezu kuka-200 ezinamandla kune-morphine. Yingakho ukubanga kungasisondeza ngaphezu kwamanye ama-caresses! Ngaphezu kwalokho, lapho ukuxuba kuhlanganiswa nomsebenzi wazo zonke izicathulo zobuso ezingu-29, izinyathelo zokwandiswa kwezidakamizwa kanye nokunikezwa kwegazi ebuchosheni. Imibhangqwana evusa njalo yonyaka ingalahlekelwa isisindo ngo-3 kg!
Umbuzo 9. Amaphupho abesilisa nabesifazane abahlukumezayo ahluke kanjani?
Amafantasi abesilisa nabesifazane ahlukile, kusho u-Vladimir Prokhorov wezocansi. - Amadoda avame ukucabangela ubulili nomlingani wangaphandle noma ubulili beqembu. Izinganekwane zomama ziningi ngokomzwelo. Ngamaphupho, abesifazane bavame ukwenza izenzo ezinesibindi nezingaqondile, ezingenakuze bazenzele empilweni. "
Umbuzo 10. Ingabe ukuyeka ukuzilimaza kuyingozi?
Enye yemibuzo evame ukubuzwa kakhulu. "Yebo," odokotela bathi ngezwi elilodwa. "Indoda, ukuyeka ukuhlala isikhathi eside kugcwele ukulimala, ukwehla kwesidoda semvelo, ukuvuvukala kwe-prostate gland," kuchaza i-sexologist uGalina Lazareva. - Abesifazane futhi akufanele baphile ngaphandle kocansi isikhathi eside, kungabangela ukuphazamiseka kwemizwa, futhi ukuqhuma kwegazi ezithombeni zomzimba kusongela ama-ovari nama-appendages. "
Umbuzo 11. Kungani ubuhlungu ngesikhathi sezocansi?
"Isizathu sobuhlungu singase sibe yisikhathi esifushane, lapho ungenaso isikhathi sokuphumula. Unganqikazi ukutshela lo mlingani ukuthi udinga isikhathi esincane sokuthi "ukufudumala", - weluleka isazi sezocansi uVladimir Prokhorov. - Esinye isizathu esingaba khona - isabelo esanele sokwakheka okugcoba esiswini. Lokhu kungenzeka ngenxa yokusetshenziswa kotshwala noma ukuncelisa. Sebenzisa i-lubricant ukuze lula ukungena. Ukushisa kungase kwenzeke ngenxa yokutheleleka kwesitho sangasese, ukucasuka kwe-mucosa noma ukuvinjelwa okungavumelani kwamasipha omzimba. Esikhathini esilandelayo, kuzodingeka uthintane nomjozi wezifo zengqondo noma isazi sengqondo, ngoba cishe akunakwenzeka ukunqoba u-vaginism. "
Umbuzo 12. Indlela yokuthola imisipha "efanayo"?
Zama ukufaka umunwe esiswini: imisipha efanele kufanele icindezeleke ngomunwe, kodwa imisipha yesisu, izibhamu kanye ne-back should not strain. Uma ungazizwa unesisindo esifanele, zama ukubambezela inqubo ngokucophelela ngenkathi uchama.
Umbuzo 13. Kungani kubalulekile ukuqeqesha imisipha esondelene?
Ukwakhiwa kwemisipha esondelene, ngaphezu kokuzwa okujabulisayo ngesikhathi socansi, kungakhonza enye insizakalo ewusizo kubo bobabili besilisa nabesifazane. "Imisipha eqeqeshwe yenza kube lula ukwenza imiqulu ibe buhlungu kakhulu futhi inciphise kakhulu ingozi yokuphulukana kwezicubu zomzimba. Basiza ukunqoba ubuhlungu ngesikhathi sezocansi nokuvimbela ukuvuthwa okuzenzekelayo (isibonelo, ngesikhathi sokukhipha), uchaza umjozi wezifo zengqondo u-Irina Malpheeva. - Amadoda akwazi ukusekela ithoni yemisipha ehilelekile ekuqhutshweni kwe-ejaculation. Ngakho-ke, zingavimbela ukuthuthukiswa kokungaziphathi kahle, futhi zandise ubulili futhi zithuthukise ukuzwa kwe-orgasm. "
Umbuzo 14. Yini engabhekwa njengesizathu esanele sokudlulisela isikhalazo ku-sexologist?
"Uma sikhuluma ngabantu, izizathu ezijulile zokuya kudokotela ziyi-ejaculation, futhi i-ejaculation engakafiki ngaphambi kwesikhathi," kusho u-vice-president we-Russian Association of Sexologists u-Eugene Kulgavchuk. - Kungcono ukuthi abesifazane bafune usizo oluvela kubachwepheshe be-vaginism nokuntuleka kwe-orgasm okuyiminyaka ende (engaphezu kweminyaka emibili) yokuphila ngokocansi ejwayelekile. Kule mibuzo mayelana nobulili, akufanele ufune impendulo ngokwakho. "
Umbuzo 15. Yini uDon Juan wangempela angayenza?
Kuvela ukuthi ama-sultans kanye nama-sheikh, azungezwe ngamakhosikazi amaningi azinikezele, akuzona abantu abathandekayo nabashisayo kakhulu. Irekhodi eliphelele - izingane ezingu-47, ezanikezwa i-Bedouin eyodwa ezivela e-United Arab Emirates, zashaywa amaBrazil amabili. Akuzange kube nomunye uFidelis Florentine oneminyaka engu-54 ubudala owanikezele izingane zakhe ezingu-53, futhi kuzo zonke izimo, ukuhlonishwa ngokomthetho kwabazali. Omunye waseBrazil uJoseph Almeida unabesifazane abahlanu kuphela namakhosikazi amathathu ahlala njalo anamadodana namadodakazi angaphezu kuka-60.
UDu Juan Evgeni Prokofiev oneminyaka engu-75 ubudala waseRashiya wabhala ngaphambi kokufa kwakhe incazelo ye-578 yezikhulu zakhe. Futhi lokhu kakade isicelo kuGuinness Book of Records!
Umbuzo 16. Yiziphi izingxenye ezikhohliwe ezilahlwe ngamadoda?
"Ngaphandle kwezinsipho, ukungena kwamasimini kanye ne-clitoris ngezindawo eziqinile ezinamaphesenti kwabesifazane ngokuvamile kuvame ukuphakama kwendlebe, amajwabu, amahlombe kanye nendawo" yesikati "ngemuva emkhatsini wezintambo zamapayipi, - kusho umhlengikazi, u-sexologist u-Alexander Poleyev. - Kukhona abesifazane abangezwa iminwe nezinzwane zezinzwani, izibhamu, inkaba, isisindo, amathanga angaphakathi, kanye nendawo ngaphansi kwamadolo isenzo esihle. Kungcono uma owesifazane eyazi "izindawo zakhe eziyimfihlakalo" futhi akanakuzaza ukukhombisa ukuthi yini okufanele bayenze. "
Umbuzo 17. Usebenza kanjani i-Viagra?
Umholi phakathi kwemibuzo ebuzwa kakhulu mayelana nobulili. Isenzo se-sildenafil yamaphilisi esimangalisayo (igama elithi commercial "Viagra") ukuqinisekisa ukuthi ukugeleza kwegazi okusebenzayo kuya epeniseni ukulungiswa okugcwele, okuqinile. Kodwa lesi sidakamizwa ngokwawo asijabuli, senza kuphela "umsebenzi osizayo" lapho umuntu "efuna". Phakathi kwemiphumela emibi kukhona ikhanda, i-dyspepsia, isifo sohudo nomthwalo osindayo enhliziyweni.
Ukwenyuka komzimba kuyingozi kakhulu kwabesifazane
Imodeli yaseRussia yezocansi ze-tantric
Isilinganiso semishwana yamanga ombhede
Kungani abesifazane bebonisa i-orgasm
I-oral oral - Uthando lwesiFulentshi
Ungathanda kanjani ukuthandana nomuntu emva kocansi?
Imithetho eyisisekelo yobulili ephephile
Iklabishi esitsheni - zokupheka kangcono nsuku zonke
Umfundisi wesigungu: izingubo ezinhle kakhulu kusuka ekuguqulweni kwezinguquko
Awukwazi ukuthethelela, awukwazi ukubuyela
I-Horoscope ye-Scorpio-Abesifazane ngo-December 2016
U-Witty uphendula imibuzo engacacile
Ukupheka kwamaqebelengwane alula kakhulu
UVichy - izimonyo ezisekelwe ku-roses
Ukudla kwe-caffeine ngesikhathi sokukhulelwa nokuncelisa
Izithelo ezingavamile zaseThailand
Izinkondlo ezimfushane zokusebenza ekuseni ngoNyaka Omusha enkulisa nasezikoleni eziyinhloko: izibalo zanamuhla nezombongi
Indlela yokugqoka emva kuka-40: amathiphu ama-stylists
Indlela yokupheka ujamu kusuka kuma-apricot
Imikhiqizo ye-Breast augmentation
Ukugeza kwezinyawo zokukhathala ukususwa